नेपाल आज | गिनीज बुकमा नाम लेखाएका नेपाली जादुगर, जसले जादुकै माध्यमबाट समाजसेवा गरेका छन् (भिडियोसहित)
समाज भिडियो सफलताको कथा
गिनीज बुकमा नाम लेखाएका नेपाली जादुगर, जसले जादुकै माध्यमबाट समाजसेवा गरेका छन् (भिडियोसहित)
बुधबार, २७ बैशाख २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
‘जादु केहो ?’ यो कसरी र केका लागि गरिन्छ ? गिनीज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्मा नाम लेखाउन सफल नेपालको पहिलो जादुगर सुरज मैनालीलाई यो प्रश्न धेरैले गर्छन् । उनीसंग त्यसको वास्तविक जवाफ हुदैन् । उनले दिएको उत्तर कतिपयले बुझ्दैनन् । कतिपय मानिसहरु उनको कुरा विस्वास गर्दैनन् । ‘जादु कुनै चमत्कार हैन, नत रत्नपार्कमा देखाउने चटक नै हो । यो त विज्ञान र कलाको अनौठो समिश्रण हो ।’ मैनाली थप्छन्–‘तर, यसको अर्थ नबुझ्नेहरुले जादुलाई चटक सम्झे, मन्त्र भनेर प्रचार गरे । मागी खाने भाडो बनाए । तर, त्यसको विकास र विस्तारमा ध्यान दिएनन् ।’
मैैनाली गिनीज बुक अफ वल्र्डस् रेकडसर््मा नाम लेखाउने एकमात्र नेपाली जादुगर हुन् । काभ्रेमा जन्मिएका मैनालीको बाल्यकाल काठमाडौंको सिनामंगलमा बित्यो । सिनामंगलबाट नै एसएलसी सकाए । बाल्यकालमा उनी त्यतिसाह्हो अन्य बच्चाहरुजस्तो बोल्दैनथे । पढाईमा मध्यम स्तरका उनी लास्ट बेन्चरको रुपमा चिनिन्थे । एसएलसी पछि उनले मध्य बानेश्वरको लोईला कलेजबाट प्लस टु सकाए । कलेज पुग्दापनि उनको स्वाभाव परिवर्तन भएन् । बालापनको जस्तै कम बोल्ने पढाई मध्यम स्तर, अनि लास्ट बेन्चर । प्लस टु परीक्षापछि उनी फुर्सदिला भए ।
जीवनमा के गर्नेसोच बनाइसकेका थिएनन् । एउटा लक्ष्यविहीन युवा थिए । भविष्यमा के गर्ने कुनै योजना थिएन् । साथीहरुको जमातले जे गथ्र्यो उनी त्यसैको लहलहीमा लागेर हिड्थे । गन्तव्य विहिन यात्री जस्तै जीन्दगी थियो । साथीसंगतको कारणले उनले लागुऔषध सेवन गर्न थालेका थिए । त्यही बानीको कारणले उनी धेरैपटक समस्यामा परे । सोचेजस्तो केही भएन् । बल्लतल्ल ६ वर्षपछि प्लस टु पास भए । लागुऔषधले उनलाई आफ्नै घपरिवारबाट पराई बनाउदै लगेको थियो । समाजमा पनि नकरात्मक दृष्टीकोणले हेर्थे । उनी आफैलाई पनि लागुऔषधले भित्रभित्रैबाट सक्दै लगेको महसुस भएको थियो । उनले लागुऔषधलाई चटक्कै छोडिदिए । लागुऔषध छोडेर जादुको संर्घषमा होमिएका उनले त्यसपछि पछाडी फेर्कर हेर्नुपरेन् ।
यसरी सिके जादु
प्लस टु पास गर्न नसकेको बेला उनको भेट जादुगर रविन्द्र मास्केसंग भयो । मास्केले विं सं २०५२ सालमा नै आखाँमा पट्टी बाधेर मोटरसाईकलबाट चक्रपथ परिक्रमा गरेका थिए । उनीसंग भेटेपछि जादुको बारेमा उनलाई चासो बड्दै गयो । जादु हेर्दै गएपछि उनलाई जादु सिक्न मन लाग्यो । तर, व्यावसायिक रुपमा जादुगर बन्छु भन्ने सपना त्यति बेलासम्म देखिसकेका थिएनन् । उनी संगतकै कारण जादुप्रति आर्कषित भएका थिए । उनको सोच थियो एकदुई वटा सिक्छु र साथीहरुलाई देखाउछु । तर, सिक्दैगएपछि जादु उनको नशामा बस्यो । त्यसबाट उम्कन सकेनन् । एकपछि अर्को जादु सिक्दै, विभिन्न ठाउहरुमा देखाउदै गए । त्यसले उनलाई हौसला दियो । मनमनै सोचेँ–‘एकदिन अवश्य म यो जादुकै कारणले नेपाललाई विश्वभरी चिनाउछुँ । आफ्नो पहिचान जादुमै बनाउछु ।’
उनी मास्केलाई जादुको गुरु मान्छन् । उनकै कारण आफ्नो जीन्दगीले निश्चित बाटो लिएको बताँउछन् । सामान्य जादु मास्केबाट सिकेपनि त्यसपछि आफ्नो अध्यन अनुसन्धान र अभ्यासले जादुमा पहिचान बनाउन सफल भएको तर्क गर्छन् । उनले जादु सिक्ने समयमा ईन्टरनेट सहज उपलब्ध थिएन् । अन्य सामानहरु पनि सजिलै पाइदैनथ्यो । जे गरेपनि आफैँ दिमाग लगाउनुपथ्र्यो नयाँ आईडिया प्राप्त गर्ने सन्र्दभ सामाग्रीहरु केही थिएन् । उनी अहिले जादु सिक्न धेरै सजिलो भएको बताउछन् । उनले ईन्टरनेटको माध्यमबाट धेरै जादुका टेकनिकहरु सिकेका छन् । त्यही हेरेर, अनुसन्धान गर्दै मोर्डन जादु सिकेका छन् ।उनी भन्छन्–‘अहिले मैलै अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा ख्यातीप्राप्त जादुगरहरुले देखाउने जादुहरु देखाउन सक्छु । जुन नेपालका अन्य जादुगरहरुलाई गर्न आउदैन् ।’
१७ वर्षको उमेरमा मास्केसंग भेट नभएको भए उनी जे पनि हुन्थे । या अहिलेसम्म केहीहुदैनथे । १७ वर्षे उमेरको कारणले गर्दा नै जादुको एकपछि अर्को स्टेपमा आर्कषण भएको उनको तर्क छ । जादुमा आर्कषण बड्दै थियो, उनले जादु सिक्दै थिए । त्यतिबेला भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा जादुगर युगेस सरकारको मोर्डन म्याजिक भन्ने जादुको कार्यक्रम आउथ्यो । त्यो कार्यक्रम हेरेपछि उनको जादुप्रतिको सोच बदलियो । जादुमा धेरै गर्न सकिने रहेछ भन्ने भावना बिकास भयो । जादुमा लाग्नको लागि प्रेरणा सावित भयो । उनी जादु सिक्दै गर्दा प्लस टु पनि पास भए । स्नातक तहमा मिन भवन क्याम्पसमा भर्ना भए । स्नातक तह भर्ना गर्नु मात्रै भयो । जादु देखाउने व्यस्तताले पास गर्न सकेनन् । स्नातक पास गर्न नसकेपनि जादुप्रतिको लगाव र सर्मपणले गिनीज बुक अफ वल्र्डस रेकर्डमा नाम लेखाए । विश्वसामु नेपालमा पनि जादुगर छन भन्ने सन्देश दिए ।
यसरी लेखियो गिनीज बुकमा नाम
गिनीज बुक वफ वल्र्ड रेर्कड्समा नाम लेखाउन सजिलो थिएन् । जादु सिक्दै गर्दै गर्दा सात आठ वर्ष भइसकेको थियो । उनीसंग जादु गर्ने बाहेक अन्य कला केही थिएन् । बाच्ने आधार जादु मात्रै थियो । नेपालमा व्यावसायिकता नभएकाले पहिचान थिएन् । त्यही पहिचान बिहिन कला देखाएर नै उनले समय कटाइरहेका थिए । जादु देखाएर आएको आम्दानीले जीवन काटीरहेका थिए । सुरुमा उनी जादुकला जानेपनि स्टेजमा गएर जादु देखाउन सक्दैनन् थिए । सानैदेखि लजालु र लास्ट बेन्चर भएकाले दर्शकसंग फेस गर्ने सामथ्र्य विकाश भएको थिएन् । जादु कला आउथ्यो स्टेजमा गएर देखाउन सक्दैनथिए । उनलाई फसाद प¥यो । धेरै संर्घष गरेर जानेको एउटै काम छ, देखाउन आउदैन् । अब के गर्ने उनी दोधारमा परे । त्यसपछि उनी रविन्द्र मास्कले जादु देखाउने स्टेजमा जान थाले । जादु देखाउने सामान पक्रेर स्टेजमा देखिन्थे । त्यहिँ उभिएकै कारणले आत्मविस्वास बढ्दै गयो ।
धेरै ठाउमा त्यसैगरि उभिएपछि ‘म पनि सक्छु अब’ भन्ने आत्मविस्वास महशुस भयो । त्यसैगरि स्टेजमा उभिने क्रममा एकदिन एउटा जादु देखाउने मौका पाए । त्यो क्रम कार्यक्रमहरुको पिच्छे बढ्दै गयो । कार्यक्रम भएको विभिन्न ठाउँमा धेरै जादु देखाइसकेपछि उनी स्टेजमा जादु देखाउन पोख्त भए । एकदिन चाहवीलको न्यु ईंगलिस बोर्डिङ स्कुलमा कार्यक्रम थियो । जादुगर मास्केलाई जादुकला देखाउन मुड आएन् । मास्केले उनलाई आग्रह गरे । मौका कुरेर बसेको उनलाई ढुंगा खोज्दा देउता भेटेजस्तै भयो । उनले जादु देखाए ।
दर्शकहरुबाट सोचेभन्दा राम्रो प्रतिक्रिया आयो । उनी हौसिए । आत्मविस्वास बढ्यो । केही गर्न नसकेपनि जादु देखाएरै बाच्न सक्छु भन्ने सोच आयो । त्यसपछि अन्य स्कुलहरुमा साथीभाईहरुको माध्यमबाट जादुको स्टेज कार्यक्रमहरु गरे । विभिन्न स्कुल र संघसस्थाहरुमा एक्लै कार्यक्रम देखाउन थाले । एकपछि अर्को कार्यक्रम गर्दैै उनको दिनचर्या बित्यो । जीवन काट्ने आम्दानीको एकमात्र श्रोत जादु भयो । दिन, हप्ता, महिना र वर्षहरु गर्दै आठ वर्ष बिताए । त्यतिन्जेल उनले जादुमा धेरै नयाँ नयाँ टेक्निकहरु सिकिसकेका थिए ।
नेपालमा जादुगर अत्यन्त थोरै छन् । ब्यावसायिक रुपमा जादु गर्नेहरु औलामा गनिने छन् । अन्य देशहरुमा जादुगरहरुको विभिन्न संघसस्थाहरु छन् । नेपालमा कुनै जादुको संघसस्था अहिलेसम्म खुलेको छैन् । जादु गरेरै नेपालमा बाच्न गाह्हो भएको मैनालीले अनुभव गरेका छन् । गिनीज बुकमा नाम लेखाउन सजिलो हुने त कुरै भएन् । उनी आफुले देखाएको जादुको फोटो र भिडीयोहरु बनाएर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्थे । आफुले विभिन्न ठाउमा गरेको कार्यक्रमहरुको जानकारी दिन्थे । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय उनको क्रियाकलाप भारतको ‘ईन्टरनेशनल बद्रर अफ म्याजिसियनले’ नियालिरहेको रहेछ ।
उनलाई त्यँहाबाट जादु गर्नको लागि इमेल आयो । जादुको कार्यक्रमको गर्नको लागि बोलाइएकाले उनी गए । त्यहाँ गिनीज बुकको लागि तयारी भईरहको रहेछ । उनले कार्यक्रम सकिसकेपछि सो कुरा थाहा पाए । उनले १६४ जनासंग मिलेर जादु देखाए । त्यही नै गिनीज बुक अफ वल्र्डस रेकर्डमा एकैचोटी एउटै स्टेजमा सबैभन्दा धेरै मानिसले गरेको जादुको रेर्कड बस्यो । वल्र्ड रेकर्ड बनाउने टिमको उनी एउटा सदस्य थिए । त्यो भन्दाअघि ईटालीका जादुगरहरुले १५४ जनाले एकैपटक जादु देखाएर बनाएको रेकर्ड उनीहरुले तोडेका थिए ।
नेपालमा जादुु सम्भव छ, संर्घष गरेन भने जादु गरेर बाच्न गाहे छ
नेपालमा नृत्य सिक्ने ठाँउ छ । खेलकुद सिक्ने ठाँउ छ । कला, मनोरञ्जन, खेलकुद, जस्ता सबै क्षेत्रहरुको ज्ञान लिने प्रसस्तै ठाउँ छ । उनीहरुको हक हितमा काम गर्ने संग संगठन र सस्थाहरु छन् । तर, जादु सिक्ने ठाँउ खोजेपनि पाईदैन् यस्तो ठाँउमा जादु सिक्नु, जादु गर्नु, र जादु गरेरै जीवन काट्न अत्यन्त गाह्हो हुने सुरज बताँछन् । जादु गर्न प्रयोग गर्ने सामग्रीहरु विशेष प्रकृतीका हुन्छन् । ती सामानहरु भारतबाट मगाउनुपर्ने हुन्छ । महंगो त छदैछ ठुलो मात्रामा नमगाए आउन गाह्हो छ । त्यसैले उनी जादु गर्न सोचेजस्तो सजिलो नभएको बताउछन् ।
नेपालमा जादुको क्षेत्रमा राम्रो क्रेज नभएपनि यो क्षेत्रमा रहेको गुनासो छैन् । उनी आज जे छन् जादुकै कारणले छन् । उनले जादुकै कारणले विभिन्न ठाँउमा सम्मानहरु पाएका छन् । उच्च पदमा रहेका विभिन्न व्याक्तित्वहरुलाई भेटेका छन् । एभरेष्ट बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा नेपाल बाहिर गएर जादु सो गर्ने पहिलो नेपालीको नाममा विश्व किर्तीमान राखेका छन् । कुवेतको जादु एशोसियन संघको लाईफ टाईम सदस्यता लिएका छन् । राज परिवारको निजी कार्यक्रममा जादु देखाएका छन् । विभिन्न दुताबास र अन्र्तराष्ट्रिय ब्रान्डहरुले जादुको लागि उनलाई बोलाउछन् । त्यसैले उनी जादु कर्ममै मस्त र ब्यस्त छन् ।
जादुमै केही गर्ने योजना
उनले नेपाली जादुलाई विश्वभरी चिनाउन पहल गरिरहेका छन् । सार्क कन्फ्रेन्समा जादाँ विश्वका धेरै जादुगरहरु संग भेटेर उनी उत्साहित भएको बताउछन् । ‘अन्य देशहरुमा जादु सस्थागत भएको छ, व्यावसायिकता छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो केही भएको छैन् ।’ उनी गुनाशो पोख्छन् –‘सबै जादुगरहरुसंग भेटेर सस्था खोल्न मैले पहल गरे, तर कोही सकरात्मक देखिएनन् । उनीहरु ए बी सी डी सिकेर रमाएका छन् । वाक्य बनाउनुपर्छ भनेर सोचेका छैनन् । धेरैजसो नेपाली जादुगरहरु कुवामा रमाउने भएकाले समुन्द्रमा पुग्न नसकेको हो ।’
‘जादुलाई किन कला मानिदैन् ? जादुलाई किन सिर्जना मानिदैन् ? जादुलाई किन संस्थागत गरिदैन् ?’ उनीसंग प्रश्नहरुको चाङ छ । उनी थप्छन्–‘ नेपाली जादुगरहरुलाई केही नयाँ प्रयोग गर्न आउदैन् । वर्षौदेखि रत्नपार्कमा बसेर जादु भन्दै चटक देखाएर बसेका छन् । कोही नयाँ कुराहरु सिक्न चाहैनन् ।’ तर, उनी सिक्न चाहन्छन् । विभिन्न विदेशी जादुगरहरुसंग सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर सिकिरहेका छन् । इन्टरनेटबाट सिकिरहेका छन् । नेपाली जादुमा नयाँ गर्ने अनुसन्धान र अभ्यास उनले छोडेका छैनन् । त्यसैले उनी आफुलाई जादुको लागि संर्घष गरिरहेको व्याक्ति भन्न रुचाउछन् ।
‘किन यस्तो संर्घष त ?’
उनी एउटा रोचक घटना सुनाउछन्–‘जादु सिक्न सुरु गर्दै गर्दा मलाई जादु धेरै सिक्नुपर्छ भन्ने चाहना थियो । सिक्नको लागि अहिलेको जस्तो धेरै बिकल्पहरु थिएन् । जादु सिक्न रत्नपार्कमै एउटा जादुगरकोमा गएँ । १० हजार लेउ अलिकती सामान लैजाउ,जादुगर बन, पैसा कमाउ ।’ जादुगरबाट यस्तो जवाफ आयो । त्यहाँबाट नेपाली जादुगरमा जादु सिक्ने, यसको बिकास गर्ने भिजन रैन छ भन्ने प्रष्ट भए । र, जादुमै संर्घष गरेर नेपाली जादुलाई माथि पु¥याउने प्रण गरे ।
उनले जादु गरेर पैसा मात्र कमाएका छैनन् । जादुको माध्यमबाट समाजसेवा समेत गरेका छन् । अमेरिकन जादुगर ‘रन फ्लावर’ नामक जादुगरसंग मिलेर भुकम्प प्रभावित जिल्लाका विभिन्न ठाँउमा गएर जादु देखाएका छन् । जसको कारण भुकम्पको डर त्रासमा बसेकाहरु एकछिन भएपनि हास्छन् । पीडाँहरु भुल्छन् । मन हलुका पार्छन् । मानशिक रुपमा उनीहरुको मनोरोग ठिक हुन्छ । यस्तो काम धेरै ठाउँमा महिनौसम्म गरे । त्यस्तो काम गर्दा उनी खुसी त थिए नै । ती विभिन्न ठाउबाट आएका राम्रा प्रतिक्रियाहरुले जादु गर्न उर्जा प्रदान गरेको बताउछन् ।
भुकम्पको असर कम हुदै गएपछि उनले विभिन्न एनजीओहरुसंग सहकार्य गरेर जादु देखाए । विभिन्न अस्पतालहरुमा गएर बालबच्चाहरुलाई मनोरज्जन गराए । असम्भवलाई पनि सम्भव तुल्याएको जादु देखाएपछि अस्पतालमा निराश भएका बालबालिकाहरु खुसी हुन्थे । त्यहाँबाट पनि जादु गर्न उर्जा मिल्थ्इो । उनी जादुको माध्यमबाट विभिन्न स्कुलमा गएर प्रेरणदायी कथाहरु भन्छन् ।
जादुबाट नै उनले समाजसेवा र पे्ररणादायी कामहरु गर्न भ्याएका छन् । अझै समाजसंग जोडिएर काम गर्न योजनाहरु धेरै बनाएका छन् । जादुबाट उनले जीवनमा धेरै अवीस्मरणीय क्षणहरु भोगेका छन् । आफ्नो जीवन खुसी साथ बाचेका छन् । ती धेरै मध्ये एउटा घटना जीवनभर बिर्सन नसक्ने बताउछन् । जादु सिक्ने सुरुवाती चरणहरुमा विभिन्न ठाउबाट जादु देखाउन बोलाउँथे । एकदिन एउटा बच्चाको बर्थ डे मा जादु देखाउन गएका थिए । बच्चाको घाटीबाट तरबार छिराउने जादु थियो । बच्चालाई चोट लाग्यो । धन्न त्यो बच्चालाई केही भएन् । त्यो घटनापछि उनले तरबार छिराउने जादु देखाउन छोडिदिए । त्यस्ता किसिमका धेरै घटनाहरु जादु देखाउने क्रममा हुने गर्छन् । ती सबै समाधान गर्न आफु सक्षम रहेको बताउछन् । उनी जादुलाई चटकको रुपमा नलिन आग्रह गर्छन् । जादु बिज्ञान हो । ‘फर्मुला हो । यो हातको सफाई हो । आखाँको सफाई हो । दिमागको खेल हो । असम्भवलाई सम्भव तुल्याउन सक्ने भ्रम हो ।’
उनी भन्छन्–‘जादु चमत्कार हैन्, धामीझाक्री हैन् । ठगी खाने पेशा हैन् ।’ लगनशिल भएर जादुमै लाग्यो भने जादु गरेर बाच्न सकिने बताउछन् । त्यसको लागि नयाँ नयाँ टेकनिकहरु सिक्न जरुरी रहेको ठान्छन् । ‘मैलै १० वषैदेखि जादु देखाउदै आएको छु । यही पेशा गरेर जीवन धानेको छु । ’ उनी भन्छन्–‘ कला हुनेहरुको लागि जादु गरेर बाच्न सम्भव छ ।’ उनी जादुलाई विद्यालय अस्पतालमा पनि अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने बताउछन् । ‘विरामी भएर थलिएका बिरामीहरुले जादुको माध्यमबाट थोरै भएपनि हौसला र आत्मविस्वास पाउछन् । असम्भवलाई सम्भव पारेको देख्दा जीवनदेखि हार खाएकाहरुलाई बाच्ने आशा बड्छ ।’उनी थप्छन्–‘ विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्य खेलकुद र नृत्य कलाजस्तै जादुलाई पनि राख्ने हो भने बच्चाहरु स्कुल जान्छन् । जादुुको माध्यमबाट मनोरञ्जन गर्दै उनीहरुलाई पढाउन पनि सकिन्छ ।’
पक्राउ सिरहा जाद जादुगर सुरज मैनाली गिनीज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड